PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-10-15 - Siphunyukwe okuningi siyeka ushumpu
Siphunyukwe okuningi siyeka ushumpu
Isolezwe ngeSonto - 2017-10-15 - IMIBONO -
SIKHULE ezikhathini ezinzima kodwa engikukhumbula kakhulu ngalezo zikhathi ubumnandi esasiba nabo, kudlalwa, kujatshulwa, kuvakashelwana kepha ngendlela esezashintsha ngayo izikhathi kuningi okuhle engibona sesikulaxaza njengoba sesiphila kakhulu impilo yaphesheya.
Izingane zamanje ngike ngifikelwe okukhulu ukudabuka uma ngizibuka zikhula ngoba seziphuthelwa ubumnandi bangempela bokuba yizingane.
Yazi angikhumbuli nangelilodwa ilanga ngibuya ekhaya ngingangcolile uma ngiphuma ukuyodlala.
Ukungcola nje kwakuyinto esakhula ngayo ngoba ngendlela esasidlala ngayo amathuba okungangcoli ayeba mancane kakhulu. Mina ngangizithandela ushumpu ngoba ngangiyi-springi, ngangivika futhi ngigijima, kule eminye imdlalo enjengengqathu, umagalobha, namatshe ngangingazizwa njengoba ngizizwa uma kuwushumpu.
Uma kuzodlalwa ushumpu umgwaqo wawuvalwa kucace ukuthi la kudlalelwa ukuwina kukhona abancane nabadala, abafana namantombazane.
Kodwa manje sekuphele imnyaka ngagcina ukubona izingane zidlala emgwaqeni okanye emagcekeni. Iningi lezingane zihlala emakhaya manje, imizi isiyabiywa, kunzima nokuzodlala kuyona, izingane sezichitha isikhathi ziphethe amafoni noma zibuka ithelevishini lize liyoshona zigqoke umswenko okungamele ungcole. Isikhathi sikaKhisimusi bekuyisikhathi esisilangazelela kakhulu uma sekuphela unyaka, lapho uma uyingane ulangazelela kakhulu ukuya esontweni nengubo yakho kaKhisimusi bese uyangena umuzi nomuzi niphakelwe yonke inhlobo yokudla.
Lesi isikhathi lapho imindeni nomakhelwane babehlanganyelana ndawonye ukuze kujatshulwe kube mnandi ikakhulukazi ezinganeni.
Konke lokhu ngabe kudalwa yini? Isimo esesiphila kusona manje asisafani nakuqala.
Ngaphambilini izingane zakhuliswa zazi ukuthi wonke umuntu omdala ungumzali wakhe futhi kumele amhloniphe njengomzali. Ngokushintsha kwezikhathi bona abadala baqala ukuqhelelana njengomakhelwane, ukuzwana nobudlelwane kwabantu abubange busafana. Ngalokho kwanyuka izindonga ngoba nobugebengu nabo buya ngokuya buyanyuka, okube inkinga kakhulu ukuthi awube usazi ukuthi ubani ongamethemba nongeke umthembe.
Kwesinye isikhathi ngike ngizwe abanye uma bekhuluma ngokushintsha kwezikhathi bakhale ngokuthi yingoba omakhelwane manje sebezenza ngcono nalowo nalowo ufuna ukuzibona ezakhe izingane zingcono kunezinye, manje ezabo ziyavakashelwa kodwa zona azivakashi kubangwe into encane kepha asinaki umyalezo esiwuthumelelayo.
Kodwa okuyiqiniso ukuthi thina sikhule abazali bethu bengakwazi ukusithengela amathoyizi abizayo okuyinto ebiyenza ukuthi ubumnandi sibuthole emgwaqeni uma sidlala nezinye izingane.
Esikhathini samanje izingane zinomafoni nezinto eziningi ezisebenza ngogesi ezenza ukuthi zihlale zisendlini, ukungabi bikho kukagesi sikhula bekuyiyo futhi imbangela yokuthi sitholakale emgwaqeni njengoba ibingekho into ebesizoyenza endlini.
Ukukhula sidla imbuya ngothi emakhaya yikho futhi obekubanga ukuthi sigcwale umgwaqo sidlale ngoba ubuvele ukhihle esika Nandi nje ngendlala, bese ukhonjwa emgwaqeni kuthiwe hamba uyodlala uzodla usulala.
Ukukhula nogogo yikho obekwenza ukuthi sikhululeke ngoba bebekwazi ukubaluleka kokudlala kithina njengezingane, esikhathini samanje izingane sezigadwa ngo-anti abasizayo abasuke bedonswe ngendlebe ukuthi izingane zingalinge nje zilibhade phandle.
Ukushintsha kwezikhathi yinto esingeke sayishintsha futhi sayigwema into okumele siyamukele kodwa okubuhlungu nje ukuthi kuningi okusilahlekelayo njengesizwe.
Izingane kubalulekile kakhulu ukuthi zidlale ngaso sonke isikhathi ngoba ilapho ezifunda khona ezikwazi nokukhula khona zijabulile. Asigweme njengabazali ukuthi zivele zihlale zibukele ithelevishini singabozikhohlwa la esiphuma khona. Asiyiqhube le ndaba.
Jacinta Zinhle Ngobese INSTAGRAM: jacinta Ngobese